Otu esi hazie vidiyo YouTube na ndetu egwu egwu | Androidsis
Ọ bụrụ na ị na-eso ọtụtụ ọwa YouTube mgbe niile ma na-eleta ha kwa izu ka ịhụ ihe bụ ebugoro ọdịnaya ọhụrụ, o yikarịrị ka ọ ga-ewe gị sekọnd ole na ole ka ịchọta vidiyo kacha ọhụrụ, nke kacha mma.
Ọ dị nwute na YouTube anaghị egosi anyị vidiyo nke ọwa dịka ụbọchị, ma dabere na ọnụ ọgụgụ nke echiche, ọnụ ọgụgụ nke mmasị ọ natara ... N'ụzọ dị mma, ikpo okwu a na-enye anyị ohere ịgbakwunye ihe nzacha ka ị nweta ngwa ngwa kachasị ọhụrụ, vidiyo kacha ochie ...
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata otu esi eme ya hazie vidiyo YouTube na listi ọkpụkpọ, ị bịarutela akụkọ ziri ezi.
1 Otu esi edozi vidiyo YouTube
1.1 Na gam akporo
1.2 Na kọmputa
2 Otu esi edozi listi ọkpụkpọ YouTube
2.1 Na gam akporo
2.2 Na kọmputa
Otu esi edozi vidiyo YouTube
Na gam akporo
N'agbanyeghị eziokwu na Google's video ikpo okwu, YouTube, enweghị ndoro-ndoro ochichi, na ihe niile yiri ka ọ na-egosi na nke a ga-abụ ikpe n'ime afọ ndị na-abịa, si YouTube ha na-anọgide na-agbakwunye ọhụrụ functionalities n'elu ikpo okwu, tere aka ibido maka ọnọdụ ihe ùgwù i ruru.
Kemgbe 2019, YouTube na-enye gị ohere ịhazi vidiyo dị na ikpo okwu gị, ka ndị ọrụ nwee ike ịnweta ọdịnaya ahụ dabere n'ihe abụọ: na nso nso a ma ọ bụ karịa.
Ihe nzacha a enwere ike itinye naanị na ọwa YouTubeAnyị enweghị ike iji ya na isi peeji ebe a na-egosi ndụmọdụ niile dị ka vidiyo ndị anyị hụburu na mbụ, ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ha tọrọ Metusela.
para hazie vidiyo YouTube site na ọwa ọ bụla, anyị ga-emerịrị ihe ndị m gosiri gị n’okpuru:
Nke mbụ, ozugbo anyị meghere ngwa YouTube, anyị na-aga ọwa nke anyị chọrọ nzacha vidiyo dị wee pịa ngalaba Vidiyo.
Ọzọ, anyị na-aga n'elu nke ngwa na pịa Order.
N'oge ahụ, a ga-egosipụta igbe ndọda nwere nhọrọ 3:
Kacha ọhụrụ. Nhọrọ Kacha ọhụrụ, ọ ga-egosi anyị vidiyo ndị a na-ebugo na nso nso a na ọwa ma nye iwu ka ha dabere na ewu ewu ha na ọwa (ọnụọgụ mmasị, ọnụ ọgụgụ nke echiche ...).
Ụbọchị ebugo (kacha ochie). Ọ bụrụ na anyị họrọ nhọrọ a, ngwa ahụ ga-egosi anyị vidiyo ndị kacha ochie ebipụtara na ọwa.
Ụbọchị ebugo (nke kacha ọhụrụ). Nhọrọ a ga-egosi anyị vidiyo kacha ọhụrụ dabere na ụbọchị.
Ọ dị nwute na nhọrọ a adịghị echekwa n'elu ikpo okwu, yabụ anyị ga-etinye nzacha a mgbe ọ bụla anyị chọrọ nzacha vidiyo ndị e bipụtara n'elu ikpo okwu.
The njirimara interface nke ngwa bụ dị iche na nke anyị nwere ike ịhụ na mobile ngwaọrụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọrụ na-eji ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka na-enwe mmasị na YouTube, ọ bụghị onye ọ bụla na-eme ya, karịsịa ndị anyị na-eji ikpo okwu a na-ege egwu egwu.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ka esi hazie vidiyo nke ọwa YouTube Na ihe nchọgharị desktọpụ, m na-egosi gị usoro niile ị ga-eso:
Nke mbụ, anyị aghaghị banye na webụsaịtị YouTube (ị nwere ike ime ya site na nke a njikọ).
Ọzọ, anyị na-aga Nkebi vidiyo.
Ọzọ, anyị na-aga n'akụkụ aka nri nke ngwa wee pịa Iwu.
A ga-egosipụta nhọrọ atọ:
Dị ka ọ dị na ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka, Agaghị echekwa mgbanwe a na webụ. Na-amanye anyị ịmepụta ya oge ọ bụla anyị chọrọ nzacha vidiyo nke ọwa.
Otu esi edozi listi ọkpụkpọ YouTube
Ọ bụghị naanị YouTube na-enye anyị ohere ịhazi vidiyo ndị a gosipụtara na ọwa YouTube, kamakwa na-enye anyị ohere ime ya hazie ndepụta ọkpụkpọ ebe a na-ahazi ọwa.
Ndepụta ọkpụkpọ YouTube na-enye ndị na-emepụta ọdịnaya ohere otu na otu nchekwa (ịkpọ aha ya n'ụzọ dị mfe nghọta) vidiyo niile yiri ya. N'ihe banyere Androidsis, vidiyo ndị dị na ọwa anyị bụ nkewa na ndepụta: akụkọ, nkuzi, aghụghọ, Gbanyụọ- Isiokwu ...
N'ụzọ dị otu a, ọ bụrụ na onye ọrụ na-achọ vVidiyo nke aghụghọ ma ọ bụ ngwa, naanị ị ga-enweta ndepụta ahụ Nke mmeputakwa.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta hazie vidiyo dị n'ime listi ọkpụkpọ Na ngwa YouTube maka gam akporo, anyị ga-emerịrị usoro m na-egosi gị n'okpuru:
Ozugbo anyị meghere ngwa ahụ, anyị anyị na-aga na ọwa ebe anyị chọrọ nzacha nsonaazụ.
Ọzọ, pịa taabụ Ndepụta.
Naanị n'okpuru taabụ a, pịa Iwu na 2 nhọrọ ga-egosipụta:
Ụbọchị ebugo (nke kacha ọhụrụ): Nhọrọ a ga-egosi anyị n'usoro usoro oge site na nso nso a ruo na nke kacha ochie ndepụta ndị tinyegoro vidiyo ọhụrụ.
Vidiyo ikpeazụ agbakwunyere. Site na ịhọrọ nzacha a, ọ bụ naanị vidiyo ikpeazụ ebipụtara na listi ọkpụkpọ ahụ ka a ga-egosi
para hazie ka esi egosipụta vidiyo nke bụ akụkụ nke listi ọkpụkpọ YouTube, anyị ga-emerịrị usoro ndị egosiri n'okpuru:
Ọzọ, anyị na-aga na ngalaba Ndepụta.
Ọzọ, anyị na-aga na akụkụ aka nri nke webụ wee pịa Order.
A ga-egosipụta nhọrọ 2:
Vidiyo ikpeazụ agbakwunyere. Site na ịhọrọ nzacha a, ọ bụ naanị vidiyo ikpeazụ ebipụtara na listi ọkpụkpọ ahụ ka a ga-egosi.
N'ihi ụfọdụ amaghị ihe kpatara ya, YouTube anaghị enye anyị ohere nke hazie vidiyo ndị bụ akụkụ nke ndepụta ọkpụkpọ, ọ na-enye anyị ohere ịhazi ndepụta ọkpụkpọ dị ka vidiyo ndị etinyere na nso nso a si dị, ọ bụghị usoro anyị chọrọ ka e gosi vidiyo ndị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Otu esi edozi vidiyo YouTube na ndetu egwu egwu
Dreame H11 mmiri na akọrọ, nyochaa, atụmatụ na ọnụahịa